Maxaa maanta ka socda magaalada Dhuusomareeb? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa maanta ka socda magaalada Dhuusomareeb?
Maxaa maanta ka socda magaalada Dhuusomareeb?
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Maanta waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ka dhici doona kulamo kala gooni gooni ah oo ay yeelanayaan madaxda soo xaadirtay shirka ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada.
Shirka ay yeelanayaan madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ayaa berito oo sabti ah furmi doono, wuxuuna gogol xaar u yahay shirka Amniga Qaranka oo ay dowladda Federaalka horay ugu baaqday.
Madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah Federaalka ayaa kulan ay ku yeesheen Internet-ka ku go’aamiyay iney Dhuusamareeb ku kulmaan 9-ka Luulyo oo shalay ku beegneed, balse in hogaamiyayaasha qaar ay soo gaari waayeen darteed ayuu dib u dhac ugu yimid.
Si kastaba shirka berito ka furmaya Dhuusamareeb waxaa looga hadli doonaa arrimo badan oo ay ka mid yahiin: Khilaafka u dhaxeeya Jubbaland iyo Puntland oo isku dhinac ah iyo dowladda Federaalka, arrimaha doorashada iyo sidoo kale arrinta matalaadda gobolka Banaadir oo ay maamullada qaar diideen.
Inkastoo arintaas ay waxyar hoos u dhigeyso xiisaha shirka Dhuusamareeb ka furmaya berito oo la filayay iney arrimaha doorashooyinka go’aan iskood ah ka gaaraan hadana isha ayaa lagu wada hayaa waxa halkaas ka dhici doona iyo go’aamada kasoo bixi doona kaas oo go’aamin doona halka ay Soomaaliya u socdaali doonto bilaha soo aadan.